ITPEC ဆိုတာ ဘာလဲ?
Information Technology Professional Examination Council (ITPEC)၁။ ITPEC ဆိုတာ ဘာလဲ?ITPEC = Information Technology Professional Examination Council မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် အဖွဲ့ဝင် (၇) နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ IT Professional ဆိုင်ရာ Skill များ သတ်မှတ်ပြီး စာမေးပွဲများ စစ်ဆေးပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းပါ။ ITPEC မှာ မြန်မာနိုင်ငံက MCF (မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်)၊ မလေးရှားက (METEOR)၊ မွန်ဂိုလီးယားက (NITP)၊ ထိုင်းက… Continue
Added by manawphyulay on August 29, 2010 at 8:12pm —
Easy steps for social networking with drupal (part II)
Starting from part II , I will write in English as it isanecessary skill for web developers.
I had reset the www.myanmaritpro.org to show you step-by-step.
entering proxy address for… Continue
Added by Wayne on August 28, 2010 at 1:30am —
Creating Fancy Sticky Note Application with HTML / jQuery
HTML5 ရဲ့ Local Storage ကို အသုံးပြုပြီး Sticky Note Application တစ်ခု တည်ဆောက်တဲ့ Tutorial ကို Nettuts မှာ Building Persistent Sticky Notes with Local Storage ဆိုပြီး ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ Tutorial ဟာ HTML5ကို လေ့လာလိုသူတွေနဲ့ jQuery ကို လေ့လာလိုသူတွေအတွက် မဖြစ်မနေ ဖတ်သင့်တဲ့ Tutorial တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် jQuery Trick တွေ… Continue
Added by Ei Maung on August 25, 2010 at 5:30pm —
PHP Stream Training ကျင်းပပြုလုပ်ပေးမည်
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း နှင့်မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်း တို့ကကြီးမှူး၍IT နည်းပညာ ပြန့်ပွားရေး၊ IT နည်းပညာကိုတွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြု လာရေး ၊ အဆင့်မီအိုင်တီပညာရှင်များပေါ်ထွက်လာရေး တို့ကိုရည်ရွယ်၍ဟောပြောပွဲများ ၊ IT နည်းပညာ ပြပွဲ များ၊ပြိုင်ပွဲများ အရည် အချင်းစစ်စာမေးပွဲများ၊နိုင်ငံခြားပညာသင်ယူမှု အစီအစဉ်များကို အခါအားလျှော်စွာကျင်းပပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပြူတာအသင်းချုပ် (MCF) နှင့် Mahiti Infotech Pvt.Ltd… Continue
Added by Aung Aung on August 25, 2010 at 2:00pm —
No Comments မြန်မာနိုင့်ငံမှ WOW (World Of Warcraft) Online Game
မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ထုကြားမှာ wow (world of warcraft) ဆိုတဲ့online game တစ်မျိုး…
Added by Htet Nyne on August 24, 2010 at 11:51pm —
Different clock speeds foraGPU
Nvidia GPU တွေအကြောင်းကို ရေးရင်း၊ ဆွေးနွေးရင်း နဲ့ နောက်ထပ် ပြောစရာတွေ ၊ ဆွေးနွေး စရာတွေ ထပ်ထပ် ရှိလာပါတယ်။GPU တစ်ခုလို့ ပြောလိုက်ရင် Core clock, Shader clock နဲ့ Memory clock ဆိုပြီး သုံးမျိုး ကွဲနေပြန် ရော....။ ဒီတော့ ဘယ်ဟာ ဘယ်လောက် game performance ကို affect ဖြစ်တယ် ဆိုတာ မေးစရာ ဖြစ်လာတာ မဆန်းပါဘူးလေ။ဥပမာ- Geforce 8800 GT ဆိုတဲ့ GPU ကိုပဲ ကြည့်ပါ....Core: 600mhz
Added by Thiha Oo on August 24, 2010 at 12:12pm —
Nvidia GPU တို့ရဲ့ ကွာခြားမှု များ...........
Nvidia ရဲ့ GPU (Graphic Processing Unit) တွေကို ကြည့်ရင် desktop အတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ mobile version ပဲ ဖြစ်ဖြစ် model number တစ်ခုထဲမှာ ကိုပဲ sub-categories တွေ အမျိုးမျိုး ကွဲနေတတ် ပါတယ်။ ဥပမာ- GS, GT, GTS, GTX စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ဒါကြောင့် တစ်ခါတစ်လေ ဘယ်လို ကွာပြီး ဘာက ကောင်းမှန်း မသိပဲ အတော် ဦးနှောက် ခြောက်ရ ပါတယ်။ GPU model တစ်ခုမှာ အဲဒီလို နောက်က ပါတဲ့ စာသားတွေ ကွဲသွားရင်… Continue
Added by Thiha Oo on August 23, 2010 at 1:00pm —
FixingaPerformance Bug -- The Long Way
IntroI recently closedabug that caused WaitZar to load 10x slower than it should have. This has, in fact, occupied my development time for the past few weeks, mainly because I wasn't sure that this problem was actuallyabug in the first place. It was the worst kind of bug reportadeveloper can… Continue
Added by Seth Hetu on August 20, 2010 at 4:19pm —
Install Nvidia Reference drivers for OEM GPUs
ATI က laptop computer တွေမှာ သုံးတဲ့ သူ့ရဲ့ Mobility Radeon graphic processor တွေအတွက် mobility driver တွေကို ATI web site မှာ download လုပ်ခွင့် မပေးပဲ laptop ထုတ်လုပ်သူ Original Equipment Manufacturer (OEM) တွေဆီကနေပဲ download လုပ်ခွင့် ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ATI က driver update လုပ်တိုင်း desktop GPU သုံးသူတွေသာ update လုပ်ခွင့် ရပြီး laptop သုံးသူ တွေကတော့ update လုပ်ခွင့် မရခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါကို ဖြေရှင်းဖို့ Mobility Modder အကြောင်းကို ကျွန်တော် ဆွေးနွေး ဖူးပါတယ်။
အခုတစ်ခါ ATI နဲ့… Continue
Added by Thiha Oo on August 19, 2010 at 8:30am —
Drivers for ATI mobility GPUs
MobilityModder အကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ATI ဟာ မြောက်များ စွာသော laptop တွေအတွက် mobile 3D graphic chipset တွေကို ဖန်တီးပေး နေပါတယ်။ ATI Radeon HD series graphic processors တွေဟာလည်း စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းသလို ထိပ်တန်း နေရာမှာ Nvidia ရဲ့ GPU တွေနဲ့ အပြိုင် နေရာယူထား နိုင်တာ အားလုံးသိကြ မှာပါ။ ဒီနေ့ laptop graphic တွေရဲ့ ထိပ်တန်း နေရာမှာ ရှိနေတဲ့ graphic processor လို့ ပြောလိုက်ရင် Nvidia နဲ့ ATI ပဲ ရှိတယ်ဆိုတာ အားလုံး သိပါတယ်။
ATI က Nvidia နဲ့ မတူတာက သူ့ရဲ့ laptop တွေအတွက် ပြုလုပ်ထားတဲ့… Continue
Added by Thiha Oo on August 18, 2010 at 12:45pm —
No Comments Sound problem with Windows7on MacBook PRO
Apple က သူ့ရဲ့ Macbook (white) တွေနဲ့ MacBook PRO တွေကို ပြင်ပ design ရော၊ hardware တွေကိုပါ ပြင်ပြီး အသစ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဓိက ပြောင်းလဲသွားတာက CPU တွေ ကောင်းလာတဲ့အပြင် အထူးသဖြင့် graphic processor (GPU) တွေကိုလည်း အဆင့်မြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ အရင်က shader 16 ခုပဲ ပါတဲ့ Nvidia Geforce 9400M ကနေ အခု နောက် model တွေမှာ shader 48 ခုပါပြီး DDR3 memory ကို သုံးတဲ့ Geforce 320M… Continue
Added by Thiha Oo on August 17, 2010 at 3:30pm —
No Comments Web2.0 and The Future of RIAs Development
ကနေ့ ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ World Wide Web ဆိုတာဟာ စတင်ခဲ့စဉ်က Web Document တွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အပြန်အလှန် Link လုပ်တဲ့ နည်းပညာ တစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစောပိုင်းကာလ Web Page တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ Content ဟာ ပုံသေဖြစ်နေပါတယ်။ စတင်တီထွင်ခဲ့သူတွေက အဲ့ဒီလို ပုံသေ Content တွေနဲ့စပြီး၊ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ မည်သူမဆို ပါဝင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ Universal Content တွေဖြစ်လာတဲ့အထိသွားဖို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း နည်းပညာအခက်အခဲများနဲ့… Continue
Added by Ei Maung on August 15, 2010 at 5:00pm —
Mustang မှာဘာတှပွေောငျးသှားသလဲ (2)
အခနျး　၂　- ခကျြခငျြးဆကျသှယျနိုငျခွငျး
ပွီးခဲ့သော　အကွိမျတှငျ　Java SE6 (Mustang) ရဲ့　Software Maintainance နှငျ့ပတျသကျသော　OutOfMemoryErrorရဲ့ ပွောငျးလညျးခကျြကို ဖျောပွခဲ့ပွီးဖွဈ၏။　ဤအခနျးတှငျလညျး　ဆကျလကျ၍　Mustangတှငျ ပွုပွငျထားသော Software Maintainance နဲ့ပတျသကျတဲ့　အကွောငျးမြားကိုဖျောပွသှားမညျဖွဈသညျ။Software မြားကိုအသုံးပွုရငျး　အဆငျမပွမှေု့မြား　မြားစှာရှိပါလိမျ့မညျ။ Web Application မြားရဲ့　Responseမြားက　အလှနျနှေးကှေးခွငျး၊　Applicationမြားက လေးလံခွငျး　အစရှိသဖွငျ့… Continue
Added by Min Lwin on August 14, 2010 at 9:00pm —
Mustang မှာဘာတှပွေောငျးသှားသလဲ　(1)
အခနျး　၁　-　OutOfMemoryError
Mustangဆိုသညျမှာ Java SE6၏　Code Nameဖွဈ၏။　၂၀၀၆ခုနှဈ၁၀လပိုငျး၁၅ရကျနတှေ့ငျထုတျပွနျခဲ့ပွီး　လကျရှိ၂၁ကွိမျပွောငျးလဲပွီး　ထုတျပွနျပွီးဖွဈပါသညျ။　သို့ပမေယျ့　လကျရှိလုပျငနျးတှမှောတော့　Java SE 5ကို　အသုံးမြားနဆေဲဖွဈပါသညျ။　Mustangမှာလူပွောမြားနကွေတာကတော့　Script Languageတှရေဲ့ ပံ့ပိုးမှု့၊　Web Serviceတှရေဲ့ ပွောငျးလဲမှု့တှဖွေဈကွ၏။　ဘာလို့OutOfMemroyErrorက　စရတာလဲလို့ပွောစရာဖွဈပေးလိမျ့မညျ။　Script Supportနဲ့ Web… Continue
Added by Min Lwin on August 14, 2010 at 3:30pm —
No Comments ဦး​ဘှနျ​တု​မှာ ဆောဖျ့​ဝဲ​တှေ ဘယျ​လို သှငျးသလဲ
ဦးဘှနျတူးမှာ ဆောဖျ့ဝဲတှေ သှငျးပုံသှငျးနညျးက ဝငျးဒိုးနဲ့ အတျောအတနျ ကှဲပွားပါတယျ။ဝငျးဒိုးမှာ ဆောဖျ့ဝဲတဈခုကို သှငျးခငျြပွီဆိုရငျ စီဒီခှေ ဝယျပွီးတော့ဖွဈဖွဈ၊ အငျတာနကျကနေ ဒေါငျးလုပျလုပျပွီးတော့ဖွဈဖွဈ အငျစတျောလာ exe (သို့) msi ဖိုငျ ကို ရယူပါတယျ။ ပွီးတော့မှ အဲဒီ ဖိုငျကို ကလဈနှိပျဖှငျ့ပွီး ညှနျကွားခကျြတှအေတိုငျး တဈဆငျ့ပွီး တဈဆငျ့ သှငျးရပါတယျ။ဦးဘှနျတူးမှာတော့ အငျတာနကျခြိတျဆကျထားရငျ package manager ကို အသုံးပွုပွီး မိမိ အလိုရှိတဲ့ ဆောဖျ့ဝဲတှကေို လှယျလငျ့တကူ ရှာဖှေ… Continue
Added by trh on August 13, 2010 at 7:00pm —
ICT EXPO 2010 မန္တလးတွင်ကျင်းပမည်
မြန်မာနိုင် ငံကွန်ပျူတာပညာ ရှင်ပညာရှင်အသင်း (မ န္တလေးတိုင်း) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်း (မ န္တလေးတိုင်း) တို့သည် နှစ်စဉ် ကွန်ပျူတာအချက်အလက်
နည်းပညာ ပြပွဲ ကို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပလာခဲ့ ပါသည်။…
Added by Aung Aung on August 13, 2010 at 3:27pm —
No Comments Dropbox (Auto backup your files online/ Share files easily with others)
Hi !Create user account first. Then, you can download freely from the following link. I wish it will be useful for everyone!https://www.dropbox.com/referrals/NTgzMTIxMDI5 Added by May Thandar on August 12, 2010 at 9:36pm —
No Comments Information Security ဟောပြောပွဲအကြောင်း
ကဲ တောင်းဆိုတဲ့သူရှိတဲ့အတွက် မှတ်မိသမျှ ပြန်လည်တင်ပြလိုက်ရခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
အီးမေလ်းတို့ ဆာဗာတို့မှာလည်း လုံခြုံမှုလိုအပ်ကြောင်း နောက် Security ဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာ… Continue
Added by manawphyulay on August 12, 2010 at 10:11am —
New iMac & Mac Pro gets new rigs powered by ATI
AMD က6Aug နေ့ မှာ Apple မှာ နောက်ထပ် အသစ် ထွက်လာမည့် iMac နဲ့Mac Pro (Tower) တို့ မှာ ATI ရဲ့Radeon HD 4000 Series နဲ့5000 Series ထဲက Graphic Card တွေကို ထည့်သွင်း သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါတယ်။…
Added by HʈӘʈ W@í on August 10, 2010 at 8:00pm —
No Comments ဇာတ်လမ်းလေးတပုဒ်ပြောပြချင်ပါတယ်...တချို့တွေလည်းသိပြီးသားလို့ထင်ပါတယ်....တခါတုန်းက အမေရိကန် အာကာသ စခန်းဖြစ်တဲ့ NASA ပာာလကမ္ဘာကိုစူးစမ်းလေ့လာကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက computerဆိုတာမပေါ်သေးတဲ့ကာလပါ။အဲဒြါေ…
ဇာတ်လမ်းလေးတပုဒ်ပြောပြချင်ပါတယ်...တချို့တွေလည်းသိပြီးသားလို့ထင်ပါတယ်....တခါတုန်းက အမေရိကန် အာကာသ စခန်းဖြစ်တဲ့ NASA ပာာလကမ္ဘာကိုစူးစမ်းလေ့လာကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက computerဆိုတာမပေါ်သေးတဲ့ကာလပါ။အဲဒါကြောင့်သူတို့တွေမှတ်တမ်းအချက်အလက်တွေကိုလက်နဲ့ရေးမှတ်ကြရတယ်။ ....အဓိကပြသနာကအဲဒီမှာစတာပဲ....သူတို့အာကာသထဲမှာ မှတ်တမ်းရေးတဲ့အခါ သူတို့အသုံးပြုတဲ့ ballpen တွေကမှင်မထွက်ဘူးတဲ့။ ဘယ်ထွက်မလဲ ပိာုမှာကလေမရှိ၊ဆွဲငင်အား မှမရှိတာကိုး။သူတို့မှတ်တမ်းမှတ်ဖို့ဒုက္ခရောက်ကြတယ်။ ဒီကိစ္စအတွက် nasa… Continue
Added by Knight on August 10, 2010 at 12:32pm —